एसिया कपः आज भारत र हङकङ भिड्दै, कस्तो छ विगत ? - Everest Dainik - News from Nepal
एसिया कपः आज भारत र हङकङ भिड्दै, कस्तो छ विगत ?
२०७५, २ आश्विन मंगलवार
काठमाडौं, असोज २ । यूएईमा जारी एसिया कप क्रिकेटमा आज हङकङ र भारत भिड्दै छन् । खेल नेपाली समयअनुसार दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा साँझ सवा ५ बजे हुने छ ।
आजको खेलमा भारत विजयी भए एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्ने छ । तर भारतलाई पराजित गर्न सकेमा हङकङको पनि सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै रहनेछ ।
याे पनि पढ्नुस रोहित शर्माले बनाए टि-ट्वेन्टीमा विश्व रेकर्ड
हङकङ पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग ८ विकेटको पराजित भएकाले जित्नै पर्ने दबाब छ । भारत र हङकङबीच सन् २००८ मा एसिया कपमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । जसमा भारत २५६ रनले विजयी भएको थियो ।
ट्याग्स: Anksuman Rath, Asaia Cup, India Vs hongkong, Rohit Sharma